Etu esi eweputa uru site na ahia dijitalụ | Martech Zone
Naanị n'izu a, a gbara m ajụjụ ọnụ banyere ọrụ njikarịcha anyị na-arụ na otu n'ime nsogbu anyị na-ahụ dị ka ọtụtụ n'ime atụmanya anyị na mbọ ndị ahịa na-agba bụ na ha chọrọ ka ha ghara wulite saịtị ahụ maka atụmanya ha na ndị ahịa - ha wuru ya. maka onwe ha. Ekwela ka m na-ezighi ezi, n'ezie ụlọ ọrụ gị chọrọ ịhụ saịtị gị n'anya yana jiri ya dị ka akụ… mana ọ ga-ahaziri ndị isi, ikpo okwu, na ọdịnaya maka kachasị maka inweta na njigide ndị ahịa. Ihe omuma ihe a sitere Ozoemena - ụlọ ọrụ na-eweta njikarịcha ntụgharị, nyocha A / B na nchịkọta ọrụ ịgba izu.
Azụmaahịa ọ bụla n'onlinentanet na-etinye ego n'ụzọ ụfọdụ n'ahịa dijitalụ na ileba anya na data Google Trends na-egosi na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na òtù dị iche iche na-anwa ịchọta ụzọ kachasị mma iji chọpụta nloghachi na ego ahụ. N'ime akwukwo ihe omuma a weputara ufodu ihe di nkpa, onu ogugu na uzo banyere Nnweta Ndị Ahịa na Achọpụta Ndị Ahịa, usoro abuo nke ndi ahia gha acho ime ka ha nwekwuo uru.
Tags: ule ulennweta uzoagbahapụ agbahapụnjikarịcha ntụgharịmgbanwe mgbanweahịa nnwetanyocha njem ndị ahịanjikarịcha ndị ahịaobi ụtọ ndị ahịadevelopmentdigital mgbasa oziahịa efunnwale dị iche ichenet nkwalite akaramgbasa ozi n'ịntanetịakwụ ụgwọ ọchụchọIhe onwunwenkewaASocial Media Marketinguruiji nyochanjirimara centric design
Nkwurịta okwu na-agbanwe n'ike n'ike. Ndị ahịa na-ejupụta na teknụzụ nke na-eme ka njem na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enweghị atụ- na agagharị na-eduga ụgwọ ahụ.
Daalụ maka ịkekọrịta ozi infographic Douglas anyị! Ma n'ezie ekwenyere m - saịtị ahụ kwesịrị ịbụ ihe niile gbasara ndị ahịa 🙂